Xog sir ah- Habdhaqanka madaxweyne Farmaajo oo aad looga cabanayo! – Somali Forum
Dad xog-ogaal ah ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu caadaystay habdhaqan aad halis ugu ah nidaamka dowladnimada, waxaana ay ka digeen in ay arrintaas oo kale sii socoto.
Madaxweyne Farmaajo ayaa lagu eedeeyay in uusan la-tashi la samaynin xubnaha ugu magacaaban la-taliyayaasha, iyada oo ay xubnahaasna lacago badan ku qaataan shaqada ay madaxweynaha ugu magacaaban yihiin.
Dhaliisha ugu weyn ee loo jeedinayo madaxweynaha ayaa waxa ay tahay in uu arrimihii dowladda ee muhiimka ahaa kala tashado xaaskiisa, ka dibna uu go’aan iska qaato isaga oo aan cid kale la tashan.
Xeer-ilaaliyaha qaranka mudane Axmed Cali Daahir ayaa hadal uu dhawaan ka jeediyay aqalka sare ee dalka waxa uu ku eedeeyay madaxweynaha dalka, isaga oo ku sheegay in uusan wax la-tashi ah la sameyn lataliyaaasha dhinnaca sharciga ah, isla markaana uu iska galo heshiisyada aqoonta sharciga u baahan.
Lataliyaasha madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa soo wajahay shaqa-la’aan, maadama howshii aay u xilsaarnaayeen aan waxba laga weyddiin
Previous: Video instructions and help with filling out and completing use of strategic interest in somalia
Next: Farmaajo 1986-87 the rape